बालेनको अग्रता कायमै यस्ताे छ एका बिहानैकाे अपडेट
May 14, 2022 N88LeaveaComment on बालेनको अग्रता कायमै यस्ताे छ एका बिहानैकाे अपडेट
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्। ३७२७ मत गणना हुँदा बालेनले १२५४ मत ल्याएका छन्।यस्तै मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले ८७८ मत ल्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ७१९ मत प्राप्त गरेकी छन्। मतगणना जारी छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना केही समयका लागि रोकिएको छ । पाँच […]
बालेन शाहकाे अग्रता कायमै, तीन हजार ४९ मत गन्दा कसकाे कति ( ताजा अपडेट)
May 14, 2022 May 14, 2022 N88LeaveaComment on बालेन शाहकाे अग्रता कायमै, तीन हजार ४९ मत गन्दा कसकाे कति ( ताजा अपडेट)
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्। अहिलेसम्म तीन हजार ४९ मत गणना गरिएको छ। बालेन ९८० मतसहित अगाडि छन् भने उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन्। स्थापितले ८०० मत ल्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ५९४ मत ल्याएकी छन्। मतगणना जारी छ। रोल्पामा लौरो चिन्हका […]
आफ्नै ज्वाइँलाई हराउँदै ससुरा निर्वाचित ! (मतगणना अपडेट)
May 14, 2022 N88LeaveaComment on आफ्नै ज्वाइँलाई हराउँदै ससुरा निर्वाचित ! (मतगणना अपडेट)
कपिलवस्तु । कपिलबस्तुको बिजयनगर गाउँपालिका १ मा आफ्नै ज्वाइँलाई हराउँदै ससुरा निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट उम्मेदवार बनेका ईन्नर थारु आफ्नै ज्वाइँ बुधराम थारुलाई ३७२ मतले हराउँदै वडाअध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । ईन्नरले ८७३ मत पाउँदा बुधरामले ५०१ मत प्राप्त गरेका छन्। इन्नर निवर्तमान अध्यक्ष समेत ह्न्। निर्वाचन परिणामबारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आधिकारिक घोषणा गर्न […]
काठमाडाैं महानगरमा ‘द गेम इज जस्ट स्टार्ट’ स्थापित-बालेनको मतान्तर २१८ पुग्यो
May 14, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैं महानगरमा ‘द गेम इज जस्ट स्टार्ट’ स्थापित-बालेनको मतान्तर २१८ पुग्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार बालेन शाहले फेरि अग्रता बढाएका छन्। बालेनले ७६८ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थपितले ५५० मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ४२१ मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा छिन्। राप्रपाका मदनदास श्रेष्ठले १०५ मत ल्याएका छन्। काठमाडौंको १, २, ३, ४ र […]
काठमाडौंमा बालेनकाे अग्रता कायमै, बढाए स्थापितसँग मतान्तर
May 14, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौंमा बालेनकाे अग्रता कायमै, बढाए स्थापितसँग मतान्तर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन शाहले अहिलेसम्म अग्रता कायमै राखेका छन् । २ हजार ६८२ मतगणना हुँदा जारी मतगणनाको परिणाम अनुसार बालेनले ८४२ मत पाएका छन् । नेकपा एमालेका उमेदवार केशव स्थापितले ७ सय २३ मत पाएका छन् । गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसकी उमेदवार सिर्जना सिंहले ५०९ मत प्राप्त गरेकी छन् । ललितपुर […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस जेठ १ गते आइतबारकाे राशिफल !
May 14, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस जेठ १ गते आइतबारकाे राशिफल !
मेष राशि : व्यापार यात्रा अनुकूल हुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ । व्यापार बढ्नेछ। समयमै ऋण तिर्न सक्नेछ । नोकरीमा उच्च अधिकारीको सुख मिल्नेछ। शेयर बजार, म्युचुअल फण्ड आदिबाट लाभ हुनेछ। ऋण असुल गर्ने प्रयास सफल हुनेछन् । आफ्नो बोली नियन्त्रण गर्नुहोस्। वृष राशि : नयाँ आर्थिक नीति बनाउन सकिन्छ । कार्यस्थलमा भएको सुधार र परिवर्तनले […]
कैलालीको टीकापुरमा रेशम चौधरीको पार्टीले जित्याे वडाध्यक्ष, प्यानलै विजयी
May 14, 2022 N88LeaveaComment on कैलालीको टीकापुरमा रेशम चौधरीको पार्टीले जित्याे वडाध्यक्ष, प्यानलै विजयी
कैलाली । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको पार्टीले एउटा वडामा अध्यक्षसहित प्यानलै जितेको छ। शनिबार साँझ सकिएको वडा नम्बर ५ को मतगणनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षसहित पाँच जना निर्वाचित भएका हुन्। उक्त पार्टीबाट बलवीर थारू पहिलो वडाध्यक्ष बनेका छन्। टीकापुरको मेयर र उपमेयरमा पनि उक्त पार्टीका उम्मेदवार प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारभन्दा अगाडि छन्। धनगढीमा […]
गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस विजयी
May 14, 2022 N88LeaveaComment on गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस विजयी
काठमाडौं । गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा खिलध्वज पन्थी र उपमेयरमा अमृतादेवी कुँवर निर्वाचित भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माया कुँवरले जानकारी दिइन् । पन्थीले ८ हजार ६१४ मत ल्याए भने उपमेयर कुँवरले ८ हजार ६१९ मत ल्याएकी छन् । नेकपा एमालेबाट मेयरका उमेदवार राजेन्द्र पाण्डेले सात हजार ३२० मत […]
मत बराबर भएपछि, गोला थुतेर माओवादीले जित्यो वडाध्यक्ष
May 14, 2022 N88LeaveaComment on मत बराबर भएपछि, गोला थुतेर माओवादीले जित्यो वडाध्यक्ष
राेल्पा । रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका देउचन घर्ती मगर र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रकाश डाँगीबीच बराबर मत आएको छ। दुवै उमेदवारले ५४३/५४३ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि गोला प्रथाद्वारा जितको टुँगो लगाइएको छ। गोला प्रथावाट नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रकाश डाँगी वडाध्यक्ष निर्वाचित भए। ‘त्यति लामो समयको मेहनत क्षण भरकै गोला थुत्दा […]
बालेनले देखाए कमाल, मतान्तार झन् झन् बढाउँदै (ताजा अपडेट)
May 14, 2022 N88LeaveaComment on बालेनले देखाए कमाल, मतान्तार झन् झन् बढाउँदै (ताजा अपडेट)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले अग्रता कायम राखेका छन् । २२८३ मत गन्दा उनले ७३६ मत पाएका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले ६२० मत पाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ४२६ मत पाएकी छन् । भरतपुर महानगरमा मतान्तर बढाउँदै रेनु भरपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी […]